US dollar In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka (2022)
US dollar In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka taariikhda tan 1992 ilaa 2022. Lacagta shaxda diinta US dollar In Oo shilin Soomaali (2022).
Waxaan haynaa taariikh ku saabsan heerka sarrifka lacagaha ee sanad kasta. Taariikhda Qiimeyaasha US dollar qiimayaasha waxaa lagu keydiyaa goobta waqti kasta ilaa iyo 1992. Taariikhda sarrifka ee taariikh kasta iyo sannad kasta waad nala heli kartaa. Taariikhda US dollar to Oo shilin Soomaali sarrifka lacagaha laga bilaabo 1992 illaa 2022 ayaa laga heli karaa boggan. Dhammaan xigashooyinka US dollar to Oo shilin Soomaali laga soo bilaabo 1992-kii 2022 waa kuwan.
Waxaad ka arki kartaa taariikhda isbedelada US dollar / Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka sanado badan shaxanka boggan ku yaal. Sawirka taariikhda oraahyada US dollar to Oo shilin Soomaali ilaa 1992 khadka tooska ah iyo bilaash. Shaxanka bilaashka ah ee taariikhda US dollar to Oo shilin Soomaali sanadkii la soo dhaafay. Waxaad ogaan kartaa sida saxda ah Qiimaha US dollar qiimaha shaxda haddii aad kor u dhaaftay taariikhda la xushay. Kor mari shaxanka oo arag sida saxda ah US dollar to Oo shilin Soomaali xigasho sanadka la xushay.
Beddelaan US dollar In Oo shilin Soomaali US dollar In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka US dollar In Oo shilin Soomaali ku nool suuqa sarrifka Forex
May 2022 576.351381
April 2022 596.377336
March 2022 522.797947
February 2022 576.095051
January 2022 580.103627
Taariikhda Isweydaarsiga qiimaha US dollar to Oo shilin Soomaali ayaa miiska jooga sanad walba. Waxaad ka arki kartaa jadwalka taariikhda US dollar sicirka sarrifka tan iyo 1992 websaydhka. Taariikhda sarrifka shaxdan: US dollar to Oo shilin Soomaali waxaa la helaa sanad walba: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Taariikhda sarrifka ee sanad walba bilo ayaa la heli karaa adoo gujinaya isku xirka sanadka ee miiska taariikhda lacagta. Xigashooyinka billaha ah US dollar to Oo shilin Soomaali, waad arki kartaa haddii aad gujiso isku xirka sanadka ee jadwalka taariikhda sanadka.
Isbeddelka sicirka sarrifka ee US dollar to Oo shilin Soomaali muddo dheer ayaa si muuqata looga arki karaa boggan taariikhda qiimaha isdhaafsiga. Kordhinta iyo hoos udhaca US dollar / Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka sanadkasta: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1999 , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 years. Dhaqdhaqaaqa muddada-dheer ee US dollar to Oo shilin Soomaali toban sano ka badan ayay suurtagal tahay in lagu qiyaaso boggan. Boggeenna waxaa ku yaal taariikh ah qiimayaasha lacagaha oo dhan marka loo eego dhammaan.
Xulo lacag ka duwan Oo shilin Soomaali si loo ogaado taariikhda US dollar oo kaash ah lacag kale. Taariikh bilaash ah oo ku saabsan sheegashada dhammaan lacagaha 30kii sano ee la soo dhaafay qeybtan ka ah websaydhka moneyratestoday.com US dollar to Oo shilin Soomaali sicirka isdhaafsiga laga bilaabo 1992 ilaa 2022 ayaa halkan lagu muujiyey. Guji sanadka shaxda si aad u ogaato taariikhda US dollar ilaa Oo shilin Soomaali.